Famokarana voankazo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Famokarana voankazo
Ny grapes dia iray amin'ireo vokatra mahazatra indrindra, ny habetsaky ny karazana samihafa izay tsy azo isaina. Ny tsirairay amintsika dia mihaona amin'ny berry isan'andro, satria io vokatra io dia miseho amin'ny endri-tsakafo rehetra, ary mihinana izany amin'ny fahafinaretana. Ary ireo mpanararaotra manokana dia mamboly an'io zavamaniry io mandritra ny trano fahavaratra.
Ny gazo gazo (Galega) - dia manondro ny karazana zavamaniry be dia be sy an-tanety izay anisan'ny fianakavian'ny legume. Misy koa anarana hafa ho an'ny goatling, toy ny rutevka, goat rue, forester. Misy karazana kozlyatnika maro - oriental sy medikaly. Ny mahaliana indrindra dia ny famokarana osy atsinanana, satria izy io dia toy ny fambolena tsara.
Phacelia - sidera tsy manam-paharoa
Ny Phacelia dia anisan'ny fianakavian'ny rano (hydrophilic) ary ny orinasa iray isan-taona sy tokan-jiro. Ny Phacelia dia heverina ho toy ny dipoaly maitso tsara, ary koa ny sakafo ara-pananan-tsakafo sy kanto. Mendrika fisainana manokana i Phacelia noho ny fivoarany haingana, izay mitondra vondron'olona maitso.
Maniry hibiscus zaridaina isika
Hibiscus dia zavamanin'ny fianakaviana Malvaceae. Tena tian'ny mpamboly izy, satria saika ny karazan'io zavamaniry io no tena mahafinaritra. Ny voninkazo Hibiscus, na dia mitovy karazana aza, dia samy hafa be. Misy karazany maherin'ny 200 sy karazany 500 eo ho eo amin'io zavamaniry io. Fantatrao ve? Karazana hibiscus iray manontolo - ny fiainana fohy amin'ny voninkazo.
Ny Graegrass, fantatra amin'ny anarana hoe ryegrass sy Chaff ihany koa, dia zavamaniry mifangaro amin'ny karazana voninkazo atao hoe Chaff, izay anisan'ny fianakavian'ny voankazo. Ity zavamaniry maharitra maharitra ity dia miaina any Eoropa, Afrika Avaratra ary Andrefana Andrefana. Indraindray, raha tsy mahagaga dia mety ho hita any amin'ny faritra atsinanan'i Azia ny faritra tsy misy mahazatra, any Siberia Andrefana.
Ahoana ny fomba ampiasanao ny Baikal EM-1 amin'ny tranokalanao
Ny fanomanana EM momba ny teknolojia dia niditra ny tantaran'ny fambolena ho toy ny zavamananaina. Ny tantaran'ny fananganana ireo menaka toy izany dia azo sakanana hatramin'ny andron'ny Ejiptiana fara-fahakeliny. Saingy nivoaka tamin'ny 1988 ny valiny marina, izay nahazo fankasitrahana maneran-tany. Teruo Khiga, mpahay siansa japoney, dia namorona zava-mahadomelina misy bakteria marevaka mba hikolokolo ny tany lonaka ary nantsoina hoe micro-organisme EM.
Inona ireo karazana Clematis
Ny Clematis dia afaka mahagaga sy mankalaza ny rehetra amin'ny volo matsiro, ny felam-boninkazo tsara tarehy, ny endrika samihafa, ny fialana tsy mahazatra, ny fofona manitra. Ny mponina any amin'ny faritra afovoan-tany dia tsara indrindra any Eoropa ary misy karazany maherin'ny 300. Ny voninkazo iray mirakitra ny voninkazo dia afaka mamolavola ny gazy misy anao, toy ny ahitra, manosotra gazebo misy voaloboka na hazo mba hitombo ao amin'ny lavarangana.
Karazan-java-maniry mitombo ao amin'ny zaridaina
Ny Wisteria angamba no zavamaniry tena mahavariana eto an-tany. Izay nahazo fahafinaretana, fara fahakeliny teo amin'ny fiainana, mba handinihana ny voninkazo sy hahatsapa ny fofom-pirainany tokana, dia hitadidy an'io fotoana mahafinaritra io mandritra ny androm-piainany. Mety hahatratra hatramin'ny antsasa-metatra ny felam-boninkazo kiriodra, izay mampiavaka azy amin'ny ramevim-be, ka mandrakotra ny zavamaniry amin'ny clusters mahagaga, ary amin'ny ankapobeny dia toa lasa angano izy ireo.
Ny tombon-tsoavaly mahasoa, ny fampiasana herita iray ho an'ny tanjona medikaly
Matetika rehefa mandehandeha eny amin'ny zaridaina sy ny ala, dia mihaino tsara ny ahitra izay andalovantsika. Saingy matetika, io herika io dia mety ho, raha tsy famonjena, dia mety hanamaivana ary hanampy amin'ny fitsaboana ilay aretina. Ny fijery malaza: Ny firafitry ny fijery malaza dia sehatra ara-organiques fotsiny. Ahitana oksika, acetic, isolimonic, malic, glyceric, fumaric, citric and saikinosina.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fambolena thuja, ny fomba hanamboarana ahidrano avy amin'ny voa
Thuja dia iray amin'ireo solontenam-pamokarana avo indrindra amin'ny hazo aviavy. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny famolavolana drafitra. Piramida tsara tarehy ao amin'io zavamaniry io dia tena manintona tokoa amin'ny fikarakarana ary manana fananana mahasoa mba handefa ny voka-dratsiny amin'ny rivotra - phytoncides. Izany no nataon'ireo zaridaina tsara tarehy maitso sy ireo mponin'ny lohataona, izay mahafantatra ny fomba hahalehibe azy, dia lasa tia azy.
Nahoana no tsy mamelana forsytsiya, fahadisoana lehibe amin'ny fikarakarana ny kirihitra
Forsythia (anarana hafa dia Forsytia) dia akorandriaka tsara tarehy iray, solontenan'ny fianakaviana oliva, izay hahatonga fahatsiarovana hafanana sy lohataona amin'ny andro mafana voalohany. Ny zavamaniry miloko volon-koditra dia tsy hanatsara ny endrika ivelany fotsiny ao an-jaridainanao, fa hampitolagaga koa ny mpandalo rehetra.
Torohevitra amin'ny fambolena sy fikarakarana ny enotera
Ny voninkazo dia voninkazo maharitra izay fantatra amin'ny anarany eo afovoany, izany hoe: "alina primrose" na "jiro hariva". Ny zavamaniry dia mendrika ny anarana toy izany noho ny lokon'ny volom-bolamena sy ny voninkazo be dia be amin'ny hariva. Fantatrao ve? Ny genotype enotera dia ahitana zavamaniry isan-karazany isan-taona, biennial sy maharitra isan-taona.
Inona no ilain'ny tarragona, fampiasana ara-pahasalamana?
Maro amin'ireo vehivavy mpikarakara tokantrano no liana amin'izay tarragona ary inona no antony ampiasana izany. Ity zavamaniry ity dia antsoina koa hoe "Tarkhun-grass", ary io dia ny karazana Wormwood. Ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny toetra mahasoa ny zavamaniry, ary koa momba ireo aretina azo sitranina amin'ny fanampian'ity zary mahafinaritra ity. Ny akora simika amin'ny tarragona Ny singa simika ao amin'ny zavamaniry dia manampy amin'ny fahatakarana ny faritra sy amin'ny inona ny aretina azo ampiasaina.
Tarragona: fisafidianana ireo karazana voankazo mahazatra indrindra
Ny fianakaviana mpiara-mitory dia aseho ao amin'ny trano famokarana mpamokatra voninkazo sy zaridaina avy amin'ny tarragona olitra-maitso maniry taratra (tarragona), izay mamelana amin'ny volana Aogositra-Septambra miaraka amin'ny voninkazo mavo (marefo). Mitranga izany fa tsy mahatsikaiky. Aztec Aztec dia voatery tamin'ny anaran'ny fiaviana Meksikana fahiny. Tena tapa-bolana sy mivelatra.
Ny fananana ara-pahasalamana amin'ny vatomamy volomparasy noho ny "lakana ahiana"
Ny zavamaniry isan-karazany, izay misy ravina mena sy volon'ondry volomparasy, dia manana anarana maromaro (karavasy hareza, zana-kazo, vatosoa volomparasy) ary malaza amin'ny fanasitranana azy. Ny karazana zavamaniry dia misy karazany 600 eo ho eo, izay ririnina sy maingoka ary maoderina sy maitso.
Ahoana no fomba itomboan'ny tarragona ao amin'ny saha?
Tarragon dia zavamaniry isan-taona, iray amin'ireo karazam-bary. Fantatrao ve? Io no karazam-borona tokana izay tsy manana ny toetra mampiavaka ny zavamaniry. Ny haavony dia afaka miakatra hatramin'ny iray metatra sy sasany, ny ravina dia tery, ary ny fotaka dia mavo-maitso, mavo-fotsy, hita any amin'ny faran'ny tendro.
Ahoana ny fampielezana ny jiolahimboto amin'ny fahalavoana
Thuja na, araka ny ambaran'ny olona azy, ny "hazo mamelona" dia tandindonin-doza avy amin'ny fianakaviana cypress. Tui dia manetry tena amin'ny tany sy ny toetr'andro, noho izany dia mora ny mandeha any amin'ireo tanàn-dehibe. Ampiasaina betsaka izy ireo fa tsy amin'ny sehatry ny fambolena fotsiny, fa amin'ny zaridaina ihany koa. Marihina tsara ny faritany ary manangona azy ireo ny lalambe.
Ny karazam-bozaka maloto avy any andrefana, miaraka amin'ny famaritana sy ny sary
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-draharaha Mafanafana, mangatsiaka, mangidy, misy hazo sy karakarazo. Tany Eoropa, dia nisy importa avy tany Amerika Avaratra. Tany am-piandohan'ny renirano sy ny alondrano no nipetraka tany am-boalohany, tsy niraharaha fiahiana. Noho izany, tena malaza amin'ny fambolena zaridaina izy io. Thuja tandrefana dia manana karazany maro, ary alohan'ny hifidiananao ny iray izay mahaliana anao, dia mila mahafantatra ireo endri-javatra ianao.
Tsiambaratelon'ny fambolena sy fiahiana ny iberis
Ny Iberis tsara tarehy, izay anisan'ny fianakaviamben'ny fianakaviana voan'ny diabeta, dia fantatry ny mpamantatra ny alpine slides, ny singa ao anaty tavoahangy floral, rockies. Amin'ny endriny dia tahaka ny karaoty sy ny radi. Iberis dia manintona amin'ny fambolena sy fikarakarana, ka na ny mpamboly novaina aza dia afaka mitantana izany. Fantatrao ve?
Ireo toro-hevitra lehibe momba ny fikarakarana any ivelany
Calla dia nanintona endrika endrika tsy fahita firy, fisehoana ivelany sy mahatsikaiky mahavelona. Fa ny mpamboly voninkazo dia tia izany satria ny voninkazo dia mora azo zaraina ao anaty zaridaina sy ao anaty vilany ao an-trano. Amin'ny iray amin'ireto tranga ireto, antsoina hoe planta dia zavamaniry tsy mendrika. Fambolena antsoina ao amin'ny zaridaina amin'ny lohataona. Ny fananganana antsoina eny an-kalamanjana dia atao amin'ny lohataona.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao dia ny maniry volom-borona: torohevitra mahasoa ho an'ny vao teraka
Helianthum (avy amin'ny teny grika: helios - masoandro sy anthos - voninkazo), amin'ny teny Rosiana - voninkazo, dia zavamaniry mahavariana mahatalanjona miaraka amin'ny voninkazo mavo, mena, mavokely na fotsy, izay, noho ny tsy fisehony sy ny fivoarany haingana, dia afaka manamboatra fialantsasatra fizarana. Ravinkazo marevaka mandrakotra hatramin'ny 30 cm miala amin'ny ravina maitso maitso matevina na volafotsy volomparasy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famokarana voankazo